User:Kadiir Abdullaxiif - Wikipedia
Aanaan Sirkaa, Naannoo Oromiyaa Arsii keessatti argamti. Magaalaan guddoon Aanichaa Gobeessa jedhamti. Magaalaan Gobeessaa Kibba Bahaa Itoophiyaa keessatti argamti. Magaalli tuni kan itti argamtu Godina Arsii, Naannoo Oromiyaa yommuu ta'u, Laatituudii Kaabaan 07°37 fi Loongituudii Bahaan 39°30 ta'u qabdi. Olka'iinsa sadarkaa sirrii galaana gubbaa meetira 2353 irratti argamti. Gobeessi Magaalaa guddoo Bulchiinsa Aanaa Sirkaati.
Akkaataa Lakkoofsa Istaaksiin Ummataa bara 1999/2005 ibsutti Gobeessi baay'ina Ummataa walitti qabaa 10,170 qabdi. Kanneen keessaa Dhiirri 5,010 yommuu ta'u, 5,160 Dubartoota. Bara 1994 ALA tti, akkaataa gabaasa (National Census Reported) ibsutti Ummanni magaalichaa 5,689 ture. Kana keessaa 2,717 Dhiiraa fi 2,972 Dubartoota.
Barreessaa: Kadiir Abdullaxiif Hajjii
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Kadiir_Abdullaxiif&oldid=31046"
This page was last edited on 31 Muddee 2018, at 06:01.